7 महत्वपूर्ण UX कौशल र तिनीहरूलाई कसरी विकास गर्ने - Print Peppermint
घर / डिजाइन ब्लग / असंगठित /7महत्वपूर्ण UX कौशल र तिनीहरूलाई कसरी विकास गर्ने
किनभने UX डिजाइन यस्तो विविध उद्योग हो, यसलाई विभिन्न क्षेत्रका सीप भएका विशेषज्ञहरू चाहिन्छ। यदि तपाइँ भर्खरै UX मा सुरु गर्दै हुनुहुन्छ भने, एकैचोटि सबै सीपहरू सिक्ने प्रयास नगर्नुहोस् किनभने त्यहाँ असीमित संख्याहरू छन्। यद्यपि, तिनीहरूमध्ये, एकले मुख्य व्यक्तिहरूलाई पहिचान गर्न सक्छ जसले कुनै पनि अनुभवहीन डिजाइनरलाई सफलताको लागि नेतृत्व गर्नेछ। के तपाईंलाई थाहा छ तिनीहरू के हुन्?
UX डिजाइन अध्ययन गर्नु एक कहिल्यै अन्त्य नहुने प्रक्रिया हो। यसले ग्राफिक सामग्रीसँग मात्र काम गर्दैन तर उच्च-लेखन पनि समावेश गर्दछ।गुणस्तर पाठ सामग्री। समीक्षा गर्नुहोस् शीर्ष लेखन समीक्षा यदि तपाईं अन्तिम नतिजा अर्गानिक देखिन र आफ्नो लक्ष्यमा फिट हुन चाहनुहुन्छ भने तपाईंलाई सहयोग गर्नको लागि सही अनुकूलन लेखन समीक्षा सेवा फेला पार्न।
जब UX डिजाइन बढ्दो लोकप्रिय हुँदैछ, त्यहाँ कुन सीपहरू साँच्चै हुनेछ भनेर निर्धारण गर्न आवश्यक छ मदत सफलता हासिल।
UX डिजाइनरलाई कस्तो सीप चाहिन्छ?
तपाईंले UX को सबै सम्भावित पक्षहरूमा विशेषज्ञ हुन डिजाइनरहरू सायदै भेट्टाउनुहुनेछ। यसैले कसैले UX डिजाइनमा आवश्यक सात महत्वपूर्ण दक्षताहरू अध्ययन गर्ने र लागू गर्ने जस्ता थप ह्यान्ड्स-अन दृष्टिकोणको सिफारिस गर्दछ।
यी आधारभूत UX कौशलहरू हुन् जुन रोबोटहरूले चाँडै मास्टर गर्न सक्षम हुनेछैनन्। सफलता प्राप्त गर्न, तिनीहरूलाई दिनदिनै प्रशिक्षण सुरु गर्नुहोस्।
#1 संचार कौशल
UX डिजाइनको प्राविधिक पक्ष सीधा छ। द वास्तविक मुद्दा तथाकथित "सामाजिक कौशल" को विकास हो, जसमा निम्न समावेश छन्:
विभिन्न व्यक्तिहरूसँग सहकार्य (उदाहरणका लागि, ग्राहकहरू, कोडरहरू, उत्पादन प्रबन्धकहरू, कार्यकारीहरू, आदि)।
आजकल राम्रो काम गरेर पुग्दैन। तपाईंले परियोजना व्याख्या गर्न, मनाउन र बेच्न सक्षम हुनुपर्दछ। साथै, तपाईंले आफ्ना सहकर्मीहरूसँग मिल्नुपर्छ, जटिलसँग व्यवहार गर्नुपर्छ समस्या, सहयोग गर्नुहोस्, मध्यस्थता गर्नुहोस्, तपाईले बोल्नु भन्दा बढी सुन्नुहोस्, र संवेदनशील र कूटनीतिक हुनुहोस्।
हुनसक्छ तपाईको विचार "प्राविधिक रूपमा" उत्कृष्ट छन्, यदि तपाइँसँग संचार कौशलको कमी छ भने तिनीहरू प्रायः अस्वीकार गरिनेछन्।
कसरी विकास गर्ने:
आफ्नो संचार शक्ति र कमजोरी विचार गर्नुहोस्;
तपाईलाई अरूसँग स्वतन्त्र रूपमा सञ्चार गर्नबाट रोक्ने प्रमुख अवरोधहरू निर्धारण गर्नुहोस् (उदाहरणका लागि, मनोवैज्ञानिकमा जानुहोस्);
माइक मोन्टेरोको किताब पढ्नुहोस् "डिजाइन एउटा काम हो।" यस पुस्तकमा संचार कौशल सुधार गर्न धेरै सुझावहरू छन्।
#2 ग्राहक अनुसन्धान कौशल
मानिसहरू UX डिजाइनको आधार हुन्। यदि तपाइँ उपभोक्ताहरू को हो भनेर थाहा छैन भने तपाइँ कसरी उपभोक्ताहरूको लागि उत्कृष्ट उत्पादनहरू सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ? तिनीहरूसँग संचार, चाहे मार्फत फोन वा व्यक्तिगत रूपमा, उच्च प्राप्त गर्ने सबैभन्दा प्रत्यक्ष र शक्तिशाली तरिका हो।गुणस्तर अवस्थित उत्पादन, प्रकार्य, वा मा प्रतिक्रिया विचार.
सम्झनु पर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको कठोर प्रक्रियाको रूपमा नभई सम्भावित ग्राहकको जुत्तामा आफैलाई राख्ने प्रक्रियाको रूपमा अध्ययनमा पुग्नु हो।
यदि तपाईंसँग पर्याप्त समय र स्रोतहरू उपलब्ध छन् भने, औपचारिक अध्ययन गर्नुहोस्।
यदि तपाइँसँग पर्याप्त पैसा/समय छैन वा यदि परियोजनाको समयरेखा धेरै छोटो छ भने, तपाइँका ग्राहकहरू को हुन् भनेर अनुसन्धान गर्ने कुनै पनि अवसरको फाइदा लिनुहोस्;
पहुँचयोग्य सञ्चार च्यानलहरू (फोकस समूहहरू, ग्राहक वकालत समूहहरू, सामाजिक सञ्जालहरू, आदि) मार्फत ग्राहकहरूसँग सञ्चार गर्नुहोस्। यो आवश्यक छ ताकि तपाईले आफ्नो निर्णयलाई अनुमानको सट्टा तथ्यमा आधारित गर्न सक्नुहुन्छ।
#3 भवन जानकारी वास्तुकला कौशल
UX कहिलेकाहीं अलमलमा पर्न सक्छ। त्यहाँ धेरै गतिशील भागहरू हुन सक्छन् कि ती सबैको ट्रयाक राख्न गाह्रो हुन सक्छ। सूचना वास्तुकला उपकरणहरूको एक सेट हो जसले तपाईंलाई सबै प्रक्रियाहरू ठीकसँग व्यवस्थापन गर्न मद्दत गर्दछ।
र एक पटक यो हुन्छ, सबै कुरा ठाउँमा खस्नेछ। तपाईं पनि एक नराम्रो हुनेछ विचार तपाईं कहाँ हुनुहुन्छ र तपाईं कहाँ जान चाहनुहुन्छ।
Go फिर्ता सुरुमा र "तपाईसँग के छ," "तपाई कहाँ जान चाहनुहुन्छ," र "त्यहाँ कसरी पुग्ने" भनेर निर्धारण गर्नुहोस्।
"मेनु पदानुक्रम कसरी व्यवस्थित गर्ने?", "कुन वस्तुहरूलाई शीर्ष प्राथमिकता दिइन्छ?", "यी खोज परिणामहरूमा कुन फिल्टरहरू थप्नुपर्छ?", र "यी इन्टरफेस तत्वहरू वर्णन गर्न कुन शब्दहरू प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने प्रश्नहरूको जवाफ दिनुहोस्? "
#4 लिखित सीपहरू
UX डिजाइनरहरू बीच लेखन एक कम प्रशंसा योग्य कौशल हो। उदाहरण को लागी, यो सोचिएको छ कि कोड को ज्ञान डिजाइनर को लागी आवश्यक छ। यद्यपि, पाठसँग काम गर्ने क्षमता डिजाइनरको लागि जत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ यो लेखकको लागि हो।
तपाईलाई सहि लेख्न सिक्न धेरै समय लाग्दैन। यसरी, यसले प्रयोगकर्ता अन्तरक्रियालाई नयाँ स्तरमा लैजान्छ। कुनै पनि एप खोल्नुहोस्। यसमा नयाँ कार्यहरू र कार्य सिफारिसहरूको विवरणहरू समावेश छन्, ती सबै ध्यानपूर्वक तयार गरिएका पाठहरू हुन्।
तपाईंले यो पहिले याद नगर्नु भएको हुन सक्छ, किनभने राम्रो पाठ, राम्रो डिजाइन जस्तै, ध्यान नदिइन्छ। यदि तपाईंलाई सामग्री लेख्न समस्या भइरहेको छ भने, तपाईंले जाँच गर्न सक्नुहुन्छ विद्यार्थीहरू द्वारा मूल्याङ्कन गरिएको समीक्षा तपाईंलाई मद्दत गर्नको लागि लेखन सेवा समीक्षा वेबसाइटहरू फेला पार्न।
हरेक दिन अभ्यास;
तपाईंले आफ्नो परियोजनामा ​​लागू गर्न सक्ने उपयोगी संकेतहरूको लागि प्रतियोगीहरूको सामग्री अध्ययन गर्नुहोस्;
यस क्षेत्रमा अनुभवी पर्यवेक्षक प्राप्त गरेर पेशेवरहरूबाट सिक्नुहोस्।
#5 सहयोग कौशल
अधिक विचार त्यहाँ छन्, राम्रो छनोट। यदि तपाईंले प्राविधिक कर्मचारीहरू, अफिस प्रशिक्षार्थीहरू, र CEO रमाइलो र आकर्षक कार्यशालाहरूमा समावेश गर्न सक्नुहुन्छ भने, तपाईंको उत्पादन निस्सन्देह सफलतामा पुग्नेछ।
र त्यहाँ थप लाभ छ: तपाईंको टोली डिजाइन प्रक्रियामा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न भएको कारणले, तिनीहरूले उत्पादनमा थप लगानी गर्नेछन् र परियोजनाको दिशाको राम्रोसँग बुझ्नेछन्।
विभिन्न विभागका कर्मचारीहरू सहित संयुक्त बैठकहरूको व्यवस्था गर्नुहोस्;
विचार गर्नुहोस् विचार निर्णय गर्नु अघि टोलीको प्रत्येक सदस्यको;
परियोजनाको प्रत्येक चरणलाई सानो विवरणमा काम गर्न टोलीसँग छलफल गर्नुहोस्।
#6 समानुभूति कौशल
यो आफैलाई अर्को व्यक्तिको जुत्तामा राख्ने क्षमता हो र उसको आँखा मार्फत स्थिति हेर्न। जब डिजाइनरले प्रयोगकर्ताको कुरा बुझ्छ समस्या, ऊ समाधानको लागि आधा बाटोमा छ।
जे होस्, यदि तपाइँ केवल एक डिजाइनरको रूपमा सोच्नुहुन्छ भने, तपाइँ अन्तिम उपभोक्ताहरूको आवश्यकताहरू निर्धारण गर्नमा गल्ती गर्नुहुनेछ। मानिसहरूले यसको परिणामको रूपमा तपाईंको उत्पादन प्रयोग गर्दैनन्।
उपभोक्ता जस्तै सोच्नुहोस्;
प्रश्नहरू सोध्नुहोस् जुन प्रयोगकर्ताले तपाइँको परियोजनाको बारेमा सिक्न पछि सोध्न सक्छ। कुन-कुन सुविधाहरूले उसको चासो जगाउनेछ विचार गर्नुहोस्;
आफ्नो उत्पादन प्रयोग गर्दा उपभोक्ताको सुविधालाई विचार गर्नुहोस्। के त्यहाँ केहि चीज छ जसले तपाईलाई सताउँछ वा तपाईलाई रिस उठाउँछ?
#7 मोडलिङ कौशल
कुनै पनि डिजाइनमा, प्राविधिक रूपमा के लागू गर्न सकिन्छ र प्रयोगकर्ताहरूले के मन पराउँछन् बीच एक नाजुक सन्तुलन छ। यो जहिले पनि छिटो राख्नु राम्रो छ विचार on कागज कम्प्युटरमा बस्नु अघि।
यसले तपाईंलाई हरेक कोणबाट निर्णय विचार गर्न अनुमति दिन्छ। कम-विवरण प्रोटोटाइपहरू र स्केचहरूले महत्त्वपूर्णमा प्रतिबिम्ब गर्न मद्दत गर्दछ मुद्दाहरू। तिनीहरूले ए को सिर्जना सक्षम गर्दछ स्पष्ट पदानुक्रम, शैलीहरूको एकरूपता, र विवरणहरू जसले प्रत्येक प्रयोगकर्तालाई पहिलो-स्तरीय अन्तरक्रिया अनुभव प्रदान गर्नेछ।
यी सात दक्षताहरूले एक विश्वस्त र अनुभवी नेता बन्न र UX डिजाइनरको रूपमा दीर्घकालीन क्यारियरको सामंजस्यपूर्ण विकासको लागि आधारको रूपमा काम गर्दछ।
क्षेत्र द्रुत रूपमा विकसित हुँदैछ, र प्रवृत्तिहरू परिवर्तन हुँदैछन्। माथि सूचीबद्ध सीपहरू अहिले UX बजारमा मूल्यवान छन् र भविष्यमा आवश्यक हुनेछन्। तपाईंले UX डिजाइन प्रक्रियाको कुन पक्षलाई सबैभन्दा धेरै रमाइलो गर्नुहुन्छ भन्ने कुरालाई फरक पर्दैन: विश्लेषण, डिजाइन, वा प्रोटोटाइपिङ, समय बर्बाद नगर्नुहोस् र आफ्नो सीपहरूमा काम गर्नुहोस्। संसारलाई पेशेवरहरू चाहिन्छ।
मुख्य तस्विर: https://www.justinmind.com/blog/10-must-have-skills-for-ux-designers/
संसारमा लेटरप्रेस प्रिन्टिङका ​​लागि उत्कृष्ट कागजातहरू! →